Blockchain Izindaba 30 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 30 Januwari 2018
Cryptocurrency exchange beyalwa ukuba bayeke ibhizinisi nomdayisi ngu Regulator German
German lwezezimali Supervisory Authority (BaFin) iyalele Crypto.exchange GmbH, ukushintshana Berlin-based, ukuba ngokushesha ayeke ukuziphathisa broker zezimali.
Umyalelo lo ukhishwe ngemuva exchange isikhangisi ku-website yayo ibike, btc-now.de, ukuthi babekuthengisa bitcoins yekhasimende I-euro futhi adayise nabo kwi-exchange isitokwe, uthi BaFin esitatimendeni. I eqinile amangalelwe yentengo ngabe kufanele idluliselwe abatshalizimali ngaphakathi 30 amaminithi, liyanezela.
Ngokusho BaFin, ibhizinisi ikhomishana zezimali eziqhutshwa Crypto.exchange GmbH akugunyaziwe umlamuli. I wabathengi zezimali wathatha isinqumo ngemuva abasebenzisi bathi abazange bathole imali cryptocurrency ukuthi wadluliselwa ngokuqinile, Bloomberg uthi.
osizayo Sberbank sika Swiss ngeke lokudayisa cryptocurrency
Isakhiwo ephethwe Sberbank eSwitzerland ilungiselela ukuqala nokuhweba cryptocurrency amakhasimende, wathi Andrei Shemetov, iphini likamongameli we Sberbank futhi ikhanda lezimakethe zomhlaba ukutshalwa kwezimali – Sberbank CIB. Lesi isikhathi sokuqala isevisi yalolu hlobo wenziwa ezihlinzekwa amabhange Russian.
“Umkhiqizo kuyingozi kakhulu, Ngaphandle kwalesi simo esishubile likhulu kakhulu, ngakho ngeke ikwazi ukunikeza amasevisi wawo ukuthi mass ebanzi amakhasimende… Manje silungisa yonke ingqalasizinda ukuze uqale nokunikeza izinsizakalo ngaphakathi osizayo Swiss… Sakha isethaphu ngokugcwele zokuhweba ukuze sikwazi kokubili ukuvula isikhundla ethu futhi ahlinzeke izinsizakalo ikhasimende, leyo, sithengiselane kumakhasimende.”
Samsung sekuqalile isigaba ukukhiqizwa for chips ASIC ngoba izimayini cryptocurrency
The Bell (Korean izindaba iwebhusayithi) ibika ukuthi Samsung uye baqala ukunyathelisa ama-chips Bitcoin yezimayini kule nyanga.
Lo mbiko uthi Samsung kwase usayine isivumelwano ne inkampani hardware Chinese ezihlobene Bitcoin yezimayini, futhi yaqala ukunyathelisa kakade chips – ebala ezingaziwa Samsung olusemthethweni.
Iphinde uqhubeka athi ukuthi Samsung nalo lase igcwaliswe ukuthuthukiswa ASIC Semiconductors Bitcoin yezimayini ngonyaka odlule.
Mario Draghi: umthethonqubo Bitcoin akuyona umthwalo ECB sika
Blockchain Izindaba 06.07.2018
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 29 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Uba kanjani umthuthukisi blockchain
Blockchain Izindaba 21.08.2018